Deutsch (Luuqada jarmalka)
Kurdiya Kurmancî (Kurdish)
Dheeraad German ah
Boga bilowga > Barashada > Barashada Germanka – ALT > Ich will Deutsch lernen
Xarunta onlineka ah ee barashada German-ka
“ich-will-deutsch-lernen.de” (www.iwdl.de) waa xarun waxbarasho online ah oo bilaash ah. Waxay bixisaa layliyo kabilaama heerka A1 ilaa B1 si lamidana tiro badan oo qalabka barashada alifbeetada, oo loogu talagalay dadka luuqad kale wax kuqora.
Aaga “luuqadaha iyo shaqooyinka” waxaad kahelaysaa 30 nooc oo leh tiro oo alaabta tababarashada ee xiriirada laxiriira shaqada ilaa iyo heerka B+.
Waxa xarunta barashadu ay bixiso
“ich-will-deutsch-lernen.de” dhexdeeda waxaad barankartaa aadna kucelcelinkartaa luuqada German-ka markasta ood rabto, iyo sidaad rabto. Waxaad go’aansanaysaa layliyada aad samaynaysid, goorta, iyo sida ugu boobsiisan eed usamaynkarto shaqada. Isla waqtiga, waxaa si gaar ah kuu gacansiinaaya macalin tuushin oo xirfad leh.
Barnaamijka iyo jidadka barashada
Layliyada kujira “ich-will-deutsch-lernen.de” waxaa lagu dajiyaa qorshaha barashada, loona habeeyay sida ciyaarta sabuurada. Adaa go’aansankara halka aad kabilaabaysid, kadibna inaad raacayso “nooca” wado barasho oo lasoo jeedshay barnaamijka dhexdiisa, ama inaad dooranaysid qaybaha waxbarasho ee adiga kuufiican. Waad kucelin kartaa layliyada xilikasta, ama waad badali kartaa heerkaaga barashada. Waxaad ka arki kartaa hawshaada barashada aaga “booska barashada”.
Schnitzel iyo Dolmades – webseetka xarunta barashada ee soap opera
Sheekooyinka kayimid nolashii qoyskii Greek Tsantidis, mulkiilaha Emre the Turkish kiosk, ardayga Danishka ah Inga iyo saaxiibadeed iyo dariskeeda, dhamaan waxay kusiinayaa ilo luuqadeed oo ka imaanaaya xaaladaha kala duwan ee maalinkasta adoo lashaqaynaaya “ich-will-deutsch-lernen.de”. 45 sheekooyin, webka soap opera waxay kubaraysaa cutubyo kaladuwan waxayna kuutilmaamaysaa xarunta.
Iskaga diiwaangali si bilaash ah www.iwdl.de adoo adeegsanaaya ciwaankaaga emailka – foomka wuxuu kuqoranyahay 16 luuqadood.
Waxaad helaysaa email ay kujirto xiriir xaqiijin oodna ubaahantahay inaad dhagsiiso si aad udhamaystirto hawsha diiwaangalinta. Kadibna waad bilaabi kartaa xarunta barashada, meelkasta iyo markasta aad jeceshahay.
Hadaad rabto inaad kabarato kaqayb ahaan hogaamiyaha kooxdaada ee barashada koorsada waa inaad eray sireed kasoo qaadato ayaga. Waad isticmaalikartaa eray sireedkaan iyo ciwaankaaga emailka adoo si fudud ugu galaaya boga biloowga – xaqiiji inaadan dhagsiin batoonka “diiwaangali”.
Madoonaysaa inaad hubiso intaadan abuurin? Si sidaa loosameeyo, dooro dookha galitaanka “martida” aadna fiirisaa “ich-will-deutsch-lernen.de”.
Waxaa jiro muuqaalo caawimaad ah oo laga helikaro dhamaan qaybaha xarunta waxbarasho. Kuwaan waxay sharxayaan aaga mawduuca laxiriira iyo nooca layliga aad hada kashaqaynaysid. Macalinkaaga tuushanka wuxuu kufaraxsanyahy inuu kaacaawiyo isticmaalka “ich-will-deutsch-lernen.de”.
Halkaan dhagsii si aad toos ugu gasho xarunta barashada
Gal xarunta barashada
Khadka: +49 (0)228 975 69-77
Appka barashada - luuqada ee Einstieg Deutsch
Dadka biloowga ah: waxay helayaan app bilaash ah oo barashada Germanka.
Difaaca macluumaadka iyo amaanka